भारत र चीन विवादित सीमाबाट सेना फिर्ता - नेपालबहस
भारत र चीन विवादित सीमाबाट सेना फिर्ता
| १०:११:५० मा प्रकाशित
१० फागुन, एजेन्सी । भारत र चीनले दुई देशबीच विवादित हिमालय क्षेत्रको सीमाबाट सेना फिर्ता गर्ने कार्य पूरा गरेको भारत सरकारले जनाएको छ । भारतीय रक्षा मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको एउटा संयुक्त विज्ञप्तिमा पान्गोङ त्सो ताल क्षेत्रबाट सैनिकहरू फिर्ता हुने कार्य शनिवार सम्पन्न भएको बीबीसीले जनाएको छ ।
समाचारमा जनाए अनुसार गत जुन महिनामा उक्त क्षेत्रमा दुई देशका सैनिकहरूबीच भएको हिंसात्मक भिडन्तमा २४ सैनिकको मृत्यु भएको थियो । दुवै पक्षले लाइन अफ एक्चूअल कन्ट्रोल भनेर चिनिने सीमाको अन्य क्षेत्रमा पनि तनाव कम गर्न काम गर्ने बताएका छन् ।
फेब्रुअरी ११ तारिखमा चीन र भारतले उक्त ताल क्षेत्रबाट सेना फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका थिए । शनिवार दुवै पक्षका कमान्डरहरूले उक्त कार्य कसरी भइरहेको छ भन्‍ने हेर्न भेटवार्ता गरेका थिए । आइतवार जारी वक्तव्यमा अग्रपङ्क्तिमा रहेका सैनिकहरूलाई फिर्ता गर्नु एउटा महत्त्वपूर्ण कदम भएको समाचारमा जनाइएको छ ।
त्यस्तै यो ुलाइन अफ एक्चूअल कन्ट्रोलको पश्चिमी क्षेत्रमा बाँकी रहेका समस्याहरू समाधानका लागि पनि राम्रो आधार बन्न सक्नेु वक्तव्यमा उल्लेख छ । यो चरणमा प्रवेश गर्नका लागि कमान्डरहरूले नौ चरणका वार्ताहरू गरेका थिए ।
वक्तव्यले सीमाको अर्को क्षेत्रमा तनाव रहेको स्वीकारेको छ र वार्ता जारी राख्ने आशा व्यक्त गरेको छ । उक्त क्षेत्रमा गत जुनमा भएको हिंसात्मक झडपमा २० जना भारतीय सैनिकको ज्यान गएको थियो । चीनले गत साता उक्त घटनामा आफ्ना चार सैनिकको पनि मृत्यु भएको स्वीकारेको थियो ।
सेना फिर्ता गर्ने निर्णय गर्नुअघि सीमावारि र सीमापारि दुई देशका सैनिकहरू तैनाथ थिए । त्यहाँ महिनौँदेखि तनाव कायम थियो र उक्त क्षेत्रमा दुवै देशले ठूलो सङ्ख्यामा सैनिक परिचालन गर्दा चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो । चीन र भारतबीच दशकौँदेखि सीमा विवाद रहँदै आएको छ र त्यसैका कारण सन् १९६२ मा दुई देशबीच युद्ध पनि भएको थियो ।
बर्डफ्लु देखिएपछि सीमा नाकामा उच्च सतर्कता २ महिना पहिले
बीरगञ्जमा तस्करी बन्द कि खुला ? २ महिना पहिले
नेपाल–भारत सीमा बन्द रहिरहँदा सर्वसाधारणलाई सास्ती ३ महिना पहिले
नेपाल-भारत सीमा नाका खोल्न माग गर्दैै अनिश्चितकालीन धर्ना ३ महिना पहिले
सीमा नाका हिल्सामा खटिएका प्रहरी सिमकोट फर्किए ४ महिना पहिले
नेपाल–भारत सीमा नाका खोल्न माग ४ महिना पहिले
यमनको एक आप्रवासी शिविरमा आगलागी हुँदा आठ जनाको मृत्यु १३ घण्टा पहिले
लघुवित्तकाे १९ लाख कित्ता आईपीओ आउँदै, यस्तो छ रेटिङ अवस्था ? १५ घण्टा पहिले
आर्मीविरुद्ध ब्याटिङ गर्दै सन्दीपको टिम, यी खेलाडीले पाए मौका १६ घण्टा पहिले
विद्यालयमा ‘रेष्ट रुम’ स्थापना, छात्रा चार दिने तनावबाट छुटकारा ! १६ घण्टा पहिले
नेकपा नाम ऋषि कट्टेल नेतृत्वको पार्टीलाई : यस्ताे छ, सर्वोच्च अदालतकाे आदेश [ पूर्णपाठ ] २ दिन पहिले
दूरसञ्चार सेवा गाउँभन्दा पनि शहर केन्द्रित भएको छ : सञ्चारमन्त्री ५ दिन पहिले
तेलको मूल्यवृद्धिसँगै ओपेक मुलुकबीच कोटा निर्धारणको विषयले तनाव बढ्यो ७ दिन पहिले
प्रहरीलाई घुस दिन खोज्ने ट्रक चालक पक्राउ २ दिन पहिले
हुम्लामा भूमि आयोगको कार्यालय स्थापना ३ दिन पहिले
कांग्रेस नेता मित्रसेन दाहालको निधन ३ हप्ता पहिले
टिपरको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु, सडक अवरुद्ध ४ हप्ता पहिले
मोलुङ्ग हाइड्रोले आईपीओ निष्काशन गर्ने ६ दिन पहिले
समुदायमा रहेका क्षयरोग बिरामीको परीक्षण २ हप्ता पहिले
बङ्गलादेशबाट मल ल्याउने तयारी सुरू ४ हप्ता पहिले
विभिन्न मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ ३ हप्ता पहिले
लाभांश र हकप्रद प्रस्ताव पारित गर्न शिखर इन्स्योरेन्सले बोलायो साधारण सभा १ हप्ता पहिले
आज देशभर घाम राम्रोसँग नलाग्ने ३ हप्ता पहिले
बौद्ध धर्मको ग्रन्थ ५ करोडमा बिक्री गर्ने ६ जना पक्राउ ८ महिना पहिले
गोरु काटेर खाएको आरोपमा ४ जना पक्राउ १ वर्ष पहिले
आर्थिक समस्यामा परेका फुटबल खेलाडीलाई आर्थीक सहयोग ८ महिना पहिले
प्रदूषण गराएको भन्दै नपाले भत्काएको इँटाभट्टा चिम्नी व्यवसायीद्वारा पुनःनिर्माण १२ महिना पहिले